CHEBE MMEMME A ACHỌGHỊ NA WINDOWS 10 DEFENDER - WINDOWS - 2019
Windows Defender - Otu esi eme ka ọrụ zoro ezo nke nchebe pụọ na mmemme achọghị
Windows 10 Onye na-agbachitere bụ antivirus n'efu, na, dị ka nyocha onwe onye na-adịbeghị anya, na-arụ ọrụ nke ọma ka ị ghara iji software antivirus ndị ọzọ. Na mgbakwunye na mgbidi e wuru na nchedo nje na mmemme ọjọọ (nke a na-akwado site na ndabara), Windows Defender nwere nchedo zoro ezo na mmemme ndị achọghị (PUP, PUA), nke ị nwere ike ịhọrọ.
Ntuziaka a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ụzọ abụọ iji mee ka nchebe pụọ na mmemme na-achọghị na nchekwa Windows 10 (ị nwere ike ime nke a na nchịkọta akụkọ na iji ikikere PowerShell). O nwekwara ike ịba uru: Ụzọ kasị mma isi wepụ malware na antivirus gị adịghị ahụ.
Maka ndị na-amaghị ihe mmemme ndị a achọghị: nke a bụ ngwanrọ nke na-abụghị nje na anaghị eburu egwu ọ bụla, ma nwee aha ọjọọ, dịka ọmụmaatụ:
Mmemme ndị na-enweghị isi na-arụnyere na mmemme ndị ọzọ n'efu.
Mmemme ndị na-etinye na mgbasa ozi na ihe nchọgharị nke na-agbanwe ihu ala ma chọọ. Ịgbanwe oge nke Ịntanetị.
"Ihe kachasị mma" na "ndị na-ehicha" nke ndekọ ahụ, nanị ọrụ nke bụ ịkọwa onye ọrụ na enwere egwu 100,500 na ihe ndị dị mkpa ka edozi, maka nke a, ịchọrọ ịzụta ikikere ma ọ bụ ibudata ihe ọzọ.
Na-akwado PUP nchebe na Windows Defender na iji PowerShell
N'ikpeazụ, ọrụ nke nchebe megide usoro a na-achọghị bụ naanị na onye na-agbachitere mbipute Windows 10 Enterprise, ma n'eziokwu, ị nwere ike ịme ka igbochi nke ngwanrọ dị na Ụlọ ma ọ bụ mbipụta Ọkachamara.
Ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ iji Windows PowerShell:
Run PowerShell as administrator (ụzọ kachasị mfe iji menu nke mepere site na ịpị aka bọtịnụ "Malite", enwere ụzọ ndị ọzọ: Otu esi malite PowerShell).
Pịnye iwu na-eso ma pịa Tinye.
Edobere nchedo usoro mmemme achọghị na Windows Defender (ị nwere ike iwepu ya n'otu ụzọ, mana jiri 0 karịa 1 na iwu).
Mgbe ị gbanyechara nchebe, mgbe ị na-agbalị ịmepụta ma ọ bụ wụnye mmemme ndị achọghị ịme na kọmputa gị, ị ga-enweta ihe dịka ọkwa ngosi a na Windows Defender 10.
Ihe ọmụma dị na mgbochi nje virus ga-adị ka nseta ihuenyo ndị a (mana aha egwu ahụ ga-adị iche).
Otu esi eme ka nchebe pụọ na mmemme na-achọghị site na iji ndekọ Editor
I nwekwara ike ime ka nchebe pụọ na mmemme na-achọghị na nchịkọta ndekọ.
Mepee ndekọ nchịkọta akụkọ (Nwee R, tinye regedit) ma mepụta DWORD dị mkpa na-esonụ ndekọ ngalaba:
HKEY_LOCAL_MACHINE Software na Ikike nke Microsoft Defender
Ntọala aha ya bụ PUAProtection na uru 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE Ngwaọrụ Atumatu Microsoft Windows Defender  MpEngine
Oghere DWORD na aha MpEnablePus na uru 1. N'ihe enweghị nkebi ahụ, mepụta ya.
Wepụ aha Editor. A ga-eme ka igbochi nrụnye na ịme ihe omume a na-achọghị.
Ikekwe na ihe ndị ọzọ nke isiokwu ahụ ga - abụkwa ihe bara uru: The best antivirus for Windows 10.